Tag: marketing mialoha | Martech Zone
Tag: varotra mialoha
Ny Internet dia loharanom-baovao mahavariana izay, raha trandrahana, dia afaka mamokatra fahalalana be dia be. Saingy araka ny fanadihadiana nataon'ny CMO tamin'ity taona ity, ny ampahatelon'ny mpivarotra ihany no afaka manaporofo ny fiantraikan'ny volan'ny marketing, ny antsasany ihany no afaka mahazo ny fahatsapana ara-kalitao tsara momba ny fiatraikany, ary efa ho 20% no mahay mandrefy izay fiatraikany na inona na inona. . Tsy mahagaga raha ny fandaniam-bola amin'ny analytics amin'ny marketing dia antenaina hitombo 66% amin'ny
Ny talen-kevitry ny marketing amin'ny database dia ny ahafahanao mamakafaka sy manome isa ny valim-panantenanao mifototra amin'ny fitovizany amin'ireo mpanjifanao. Tsy toerana vaovao io; efa am-polony taona vitsivitsy izahay no nampiasa data mba hanaovana izany. Na izany aza, nampijaly ny fizotrany. Nampiasa fitaovana fitrandrahana, fanovana ary enta-mavesatra (ETL) izahay hisintonana angona avy amina loharano marobe hananganana loharanon-karena afovoany. Mety maharitra herinandro maro vao vita izany ary mitohy
Inona no atao hoe Return on Investment raha afaka manova ny varotra varotrao ianao? Ity dia fanontaniana iray apetraky ny mpanjifa lehibe manana paikady marketing sarotra (izay mahay mandanjalanja eo amin'ireo mpampita vaovao) isan'andro isan'andro. Tokony handefa radio amin'ny Internet ve isika? Tokony hanova ny marketing amin'ny fahitalavitra ve aho? Inona no ho fiantraikan'ny orinasako raha manomboka mivarotra an-tserasera aho? Matetika, ny valiny dia tonga amin'ny alàlan'ny fanandramana marobe ary very